अकस्मात ओलीकाे स्वास्थ्यमा देखियाे समस्या ! अहिले ओलीकाे अवस्था यस्ताे? – Hamro24News
July 20, 2021 adminLeaveaComment on अकस्मात ओलीकाे स्वास्थ्यमा देखियाे समस्या ! अहिले ओलीकाे अवस्था यस्ताे?
स्वास्थ्य अवस्था सुधार नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अस्पताल लगिएको छ। गत शुक्रबारदेखि सरकारी निवासमै आराम गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोमबार बिहान पुनः त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगिएको हो।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेकाले आइसियूमा भने नराखिएको अस्पताल स्रोतले जानकारी दियो।
यसअघि गत शुक्रबार नै चिकित्सकले केही दिन अस्पतालमै राख्नुपर्ने बताए पनि ओलीलाई चिकित्सकको निगरानीमा बालुवाटार नै राखिएको थियो। बालुवाटारमा क्याबिनेट चिकित्सक, कलेजो रोग विशेषज्ञ डा. दिलिप शर्मा प्रधानमन्त्रीको उपचारमा खटिएका थिए। यस्तै, फुड न्युट्रिसियनका रुपमा डा. सन्तकुमार दास पनि बालुवाटार खटिएका थिए।
स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि दशैँयता सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भएका छैनन्। शनिबार पार्टीले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सहभागी नभएपछि भने स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो बढेको हो।
छातीको इन्फेक्सन बढेपछि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या बढेको हो। स्वास्थ्य अवस्था सुधार नभएपछि आइतबार बिहानका दुई सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री सहभागी भएका थिएनन्। दिउँसो भने बालुवाटारमै मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाइएको थियो।
प्रम ओलीको उपचारका लागि ‘फूड न्युट्रिसियन’ सहित चिकित्सकको टोली बालुवाटारमा
प्रधानमन्त्री अस्वस्थ, आइसियुमा राख्‍ने तयारी भए पनि बालुवाटारमै फर्काइयो, भएको के हो?**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
गत जेठमा प्रकाशित समाचार : यस्तो छ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य स्थिति
मोबाइल चार्ज गर्ने विषयमा वि:वा’द हुँदा दा’इले ग’रे भा’इको ह:त्या !
प्रधानमन्त्री पत्नी आरजुले बालुवाटारमा रोपिन तुलसी?